काठमाडौं उपत्यका र कंक्रिटको जंगल [ फोटो फिचर ]
साउन ३०, काठमाडौं । ललितपुर जिल्लाको धोविघाटस्थित एक अपार्टमेण्ट तथा आसपास क्षेत्रमा विकास भएको बस्ती ।
काठमाडौं उपत्यका नेपालको ऐतिहासिक सहर तथा युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत क्षेत्र पनि हो । विगत केहि वर्षयता सुविधा तथा अवसरको खोजीमा काठमाडौंमा बसाईसरी आउनेक्रम वृद्धि भएसँगै उपत्यकाको काँठ क्षेत्र पनि कंक्रिटको जंगलको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ ।
कंक्रिटका घरैघरले भरिएको काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्र आजभोलि खालीठाउँ भेट्टाउन सकिन्न । ठाउँ अभावै कारण अपार्टमेण्ट निर्माण गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । चक्रपथ बाहिरका खेतहरू पनि घरले भरिन थालिसकेका छन् । बाहिरी चक्रपथ आसपासका क्षेत्र दिनप्रतिदिन घनावस्तिको रुपमा विकास भइरहेको छ । सबैको रहरको शहर र आर्थिक केन्द्र बने पनि काठमाडौंमा योजनाबद्ध शहरीकरण भने भएको छैन ।
विसं २०४६ सालपछि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिले उपत्यकामा आवादीसँगै उद्योगहरू पनि बढ्यो । अझ भन्ने हो भने द्वन्द्वकालिन समयमा त गाउँबाट विस्थापित र रोजगारीको खोजीमा रहेका सबै काठमाडौंतिर सोझिएका कारण पनि आवादी तिव्र रुपमा बढ्दै गयो ।
एक तथ्यांक अनुसार अहिले देशको कुल शहरी जनसंख्याको २२ दशमलव ७७ प्रतिशतको काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास रहेको छ । शहरीकरण बढ्दै जाँदा वर्षेनी काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रमसमेत बढ्दै गएको बुढापाकाहरुको भनाइ छ ।
उपत्यका भित्रिने जनसंख्यालाई रोक लगाउन सकिन्न, तर बाहिर जान प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि काठमाडौं बाहिर व्यवस्थित शहरहरू बनाउन वा भएका शहरलाई राम्रो पार्नमा सरकारले अझ स्रोत खर्च गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरुको भनाइ छ । तस्वीरहरु : रासस
Bidur Man Sainju
[Oct 18, 2021 07:10am]
To whomsoever it may concern, Je huni vai sakyo, aba farkawona sakinna. Aba kathmandu ma ghar banae sakeka haru baira jane ta kura nai vayena tara yeslae sundar banawona chai sakincha sabai jana milera. Public Voice